Aza manitsakitsaka ny lalàna rehefa mandeha any Thailand ianao: Mety ho faty ianao amin'ny farany
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Aza manitsakitsaka ny lalàna rehefa mandeha any Thailand ianao: Mety ho faty ianao amin'ny farany
Vaovao Mafana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Vaovao isan-karazany
Voarohirohy hita niaraka tamin'ny harona plastika teo ambonin'ny lohany talohan'ny namonoana azy.
Ny fandehanana any amin'ny firenena hafa dia mety hampidi-doza raha mandika lalàna ianao, na fanahy iniana izany na tsy nahy noho ny tsy fahalalana. Any Thailandy, ny fisamborana dia mety hidika ho mpamono olona na hanjavona fotsiny.
Misy ny fitarainana am-pahibemaso ao Thaialnd ho an'ny fanavaozana mandrara ny fampijaliana sy ny fanjavonan'ny olona ahiahiana.
Volavolan-dalàna roa no navoaka tao anatin'izay taona lasa izay ary miandry ny fanampiana ny fandaharam-potoanan'ny Parlemanta ankehitriny.
Ny praiminisitra dia nanomboka ny fanovana ny fikambanan'ny polisy tamin'ny alàlan'ny famerenany ny lalànan'ny polisy.
Ny mpitondra tenin'ny biraon'ny praiminisitra Thanakorn Wangboonkongchana dia nanambara fa ny praiminisitra Gen Prayut Chan-o-cha dia nanaiky ny ahiahy ampahibemaso momba ny raharaha talen'ny paositry ny polisy Nakhon Sawan teo aloha ary nanipika fa efa nanomboka fanovana ny fikambanan'ny polisy izy tamin'ny alàlan'ny famerenana ny lalàna Polisy .
Nandohalika teo amin'ny vozon'ny ahiahiana ny polisy ka maty.
Nanamafy ny praiminisitra fa hanohy hanery ny fanavaozana ny polisy sy hamolavola lalàna hanohitra ny governemanta ny governemanta fampijaliana sy fanjavonan'ny olona ahiahiana, taorian'ny fitarainana mafy nataon'ny vahoaka manoloana ny raharaha Kolonely Thitisan Uttanapol.
Manamboninahitra polisy Thai efatra, isan'izany ny kolonely Thitisan Uttanapol, no eo am-pelatanan'ny Polisin'ny Royal Thai ao Bangkok ankehitriny taorian'ny fipoahana horonantsary iray momba ny famonoana olona tsy nahy olona amina zava-mahadomelina tamina fikasana hanonganana azy tamin'ny vola 2 tapitrisa baht, sahabo ho $ 60,000.
Raha ny filazan'i Kittiwittayanan sy ny mpitondra tenin'ny lefitry ny polisy nasionaly kolonely Kissana Phathanacharoen, dia nanontany momba ilay olona ahiahiana 24 taona sy vehivavy iray miaraka aminy ny tompon'andraikitra momba ny mety ho fandikan-dalàna momba ny zava-mahadomelina sy ny fananana takelaka methamphetamine maherin'ny 100,000 rehefa nifanaiky handoa vola 1 tapitrisa baht izy ireo. saram-pandraharahana hahazoana famoahana.
Ny fifandonana nitranga tao Nakhon Sawan, faritany avaratry Bangkok, dia nisondrotra rehefa nametraka harona plastika teo ambonin'ny lohan'ilay voarohirohy ny Col. Thitisan Uttanapol mba hampitahorana azy hampiakatra avo roa heny ny vola ho 2 tapitrisa baht, nahafaty azy tsy nahy tao anatin'izany - aseho amin'ny horonantsary daholo izany. Rehefa avy nandohalika teo amin'ny vozon'ny voarohirohy izy ireo, dia niezaka namerina tamin'ny laoniny ilay niharam-boina tamin'ny alàlan'ny CPR ny polisy fa tsy nahomby. Ny manamboninahitra Thai dia nanondro ilay niharam-boina hoe Jeerapong Thanapat.
Kolonely Thitisan Uttanapol, iray amin'ireo manamboninahitra voarohirohy tamin'io tranga io, dia tena fanta-daza ao amin'ilay faritra, anaram-bosotra hoe "Jo Ferrari" noho ny fanangonany fiara fanatanjahan-tena lafo vidy. Ny fanangonana azy dia honohono fa misy Lamborghini fanontana voafetra Aventador LP 720-4 Faha 50 Taonambe manokana, iray amin'ireo 100 monja no novokarina eran'izao tontolo izao.
Nilaza ny praiminisitra fa tsy maintsy matanjaka ny rafi-pitsarana, amin'ny maha andry fitantanana nasionaly azy, sady manome toky fa hiatrika sazy ny polisy manitsakitsaka ny lalàna.
Ny praiminisitra dia nandidy ny Polisin'ny Royal Thai mba hanafainganana fanavaozana lehibe fito, ao anatin'izany ny ambaratongam-pahefana, ny rafitra fanadihadiana ary ny fampiharana ny lalàna, ny mangarahara amin'ny fanaovana kajy sy ny fiahiam-bahoaka.
Mikasika ireo volavolan-dalàna roa napetraka tamin'ity tranga ity dia nilaza ny PM fa voatosika hatrany izy ireo tao anatin'izay taona lasa izay ary miandry ny fanampim-panazavana ny fandaharam-potoanan'ny Parlemanta. Ny filohan'ny trano Chuan Leekpai dia nanambara tamin'ny 26 aogositra fa ny raharaha roa dia napetraka ao anaty fandaharam-potoanan'ny fifanakalozan-kevitra.
Ny votoatin'ny drafitra dia fepetra fanasaziana amin'ny fampijaliana sy ny fanjavonan'ny olona ahiahiana, ny fepetra fisorohana sy ny fanarenana ireo niharam-boina ary ny fizotry ny fanenjehana an'ireo meloka.
Ny faharoa amin'ireo volavolan-dalàna roa dia ny lalàna nasionaly polisy, izay miandry ny famakiana azy fanindroany. Ny filohan'ny karavasy an'ny governemanta Wirat Rattanaset, izay filohan'ny komitin'ny fandinihana ny volavolan-dalàna, dia nanazava androany fa ny lahatsoratra rehetra amin'ilay volavolan-dalàna dia nahatonga ny famerenana, nampihemotra ny fizotrany. Na eo aza izany, hoy izy raha manafaingana ny fandinihana ny vatana, dia afaka mamita ilay asa ao anatin'ny herintaona.
Oktobra 21, 2021 ao amin'ny 01: 33